Ahoana no nanatsarako ny sary naseho ahy ho an'ny haino aman-jery sosialy ary nampitombo ny fifamoivoizana ara-tsosialy 30.9 | Martech Zone
Ahoana no nanatsarako ny sary naseho ahy ho an'ny media sosialy ary nampitombo ny fifamoivoizana ara-tsosialy 30.9%
Alatsinainy Martsa 1, 2021 Alarobia, Aprily 27, 2022 Douglas Karr
Ny faran'ny volana novambra lasa teo dia nanapa-kevitra ny hizaha toetra tsara ny fanatsarana ny sary nasongadina ho an'ny haino aman-jery sosialy hijerena raha misy tombony azo. Raha mpamaky na mpamandrika efa ela ianao dia fantatrao fa mampiasa ny tranokalako tsy tapaka ho an'ny andrana nataoko aho.
Ny famolavolana sary mandresy lahatra kokoa izay zaraina amin'ny media sosialy dia manampy 5 na 10 minitra amin'ny fanomanako ilay lahatsoratra ka tsy fampiasam-bola lehibe… fa miampy hatrany ny minitra ary te hitandrina aho fa mampiasa tsara ny fotoako. rehefa miresaka Martech Zone.
Na dia naka sary stock izay solontenan'ny atiny fotsiny aho dia ninia nanangana sary naseho izay manana ireto manaraka ireto:
Size - Nanangana modely iray aho sary izany 1200px ny sakany amin'ny 675px lava. Nanova ny lohahevitro koa aho mba hampisehoana ireo sary amin'ity sanda voatsinjara ity.
marika - Tsy ampidiriko ao ny anaran'ny tranonkala fa ataoko ao foana ny logo mba hahafantarana azy hatrany amin'ny fanavaozam-baovao sosialy.
Title - Lohateny maharesy lahatra izay tsy voatery hifanaraka amin'ny tena lahatsoratra ao amin'ny lahatsoratro. Azoko atao ny manatsara ny lohateny ho an'ny fikarohana fa soraty indray ny lohateny amin'ny sariko hanandrana handroaka tsindry bebe kokoa.
Image - Manana famandrihana Depositphotos izay ahafahako mitady sy mahita fanoharana mahafinaritra azoko alaina sy ampidirina.
Mampiasa aho avy eo Feedpress hamoaka ho azy ireo ny lahatsoratro amin'ny fantsom-piarahamoniko. ny valiny dia bitsika na fanavaozana Facebook izay tena miavaka. Ity ny fijeriny Twitter:
Ahoana ny famahanana ny marketing dizitaly ao amin'ny corong-varotrao https://t.co/QMp6i6aq18 #martech pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
- martech zone (@martech_zone) Febroary 28, 2021
Ary on LinkedIn:
Satria voasoratra amin'ny teny Anglisy ny lohateny, dia nanao fanadihadiana aho nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay, nanala ireo lahatsoratry ny virus, ary nametra ny mpihaino ho any Etazonia, Canada, United Kingdom, New Zealand ary Australia. Somary nanaitra ny valiny…
Ao amin'ny Google Analytics, ny fanadihadihana nandritra ny fotoana maharitra momba ny referansa media sosialy dia nahatonga ny a Mihamaro ny 30.9% amin'ny fijerin'ny pejy izay avy amin'ny media sosialy izay nanatsarana ny sariko nasongadina.
Ny mahavariana dia ny fantsona media sosialy izay andaniako fotoana kely indrindra hiasana… ny pejy Facebook, no nisy fiakarana nahagaga indrindra… fisondrotana 59.4%.
Tsy tonga lafatra daholo izy io… Nahamarika aho fa ny salan'asako amin'ny pejy sy ireo pejy isaky ny fitsidihan'ireto mpitsidika vaovao ireto dia ambany (latsaky ny 10%) ka na dia mahasarika mpitsidika bebe kokoa aza aho dia mbola tsy manao asa tsara ao mitazona azy ireo eto.
Manohy miasa sy manatsara ny tranokala amin'ny fomba hafa aho, indrindra ny fandalinana lahatsoratra taloha an-jatony isan-kerinandro, manavao ny sasany, manala ny sasany, mamily lalana ny maro ary miasa amin'ny kalitaon'ny tranonkala amin'ny ankapobeny. Nampihatra an serivisy fandikan-teny mandeha ho azy izay nahita ny isan'ny mpitsidika miakatra avy any amin'ireo firenena tsy miteny anglisy.
Mandoa be ny ezaka amin'ny fividianana… statistika mandavantaona mandritra ny 30 andro farany:
Tafakatra 58.89% ny fifamoivoizana mivantana
Ny fikarohana Organika dia tafakatra 41.18%.
Tafakatra 469.70% ny fifamoivoizana amin'ny haino aman-jery sosialy
Amin'ny ankapobeny, ny tranokalako dia nitombo avo roa heny ny fifamoivoizany… izay nahafaly ahy tokoa!
Mila fanampiana amin'ny marketing nomerika anao?
Raha mila fanaraha-maso ny tranokalanao misy tetikady manokana afaka manatsara ny fahazoana anao ianao, aza misalasala mifandray amiko Highbridge. Afaka manao fanaraha-maso ho anao aho, manome fiofanana ho an'ny ekipanao, na handray anao ho mpanjifa mihitsy aza hanampiana anao hanatsara ny valin'ny marketing nomerika. Izaho koa dia tena mahay amin'ny fanatsarana ny tranokala WordPress raha mila fotodrafitrasa sy fanampiana amin'ny fampandrosoana ianao.
Fampahafantarana: Mampiasa rohy afiliana ho an'ny serivisy isan-karazany amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: sary nasongadinahaben'ny sary media sosialysary media sosialytopi-maso mialoha amin'ny media sosialyfifamoivoizana amin'ny media sosialy
Fahadisoana 11 hialana amin'ny fanentanana amin'ny mailakao